UDudu Myeni ubekwe icala lokudalula igama lofakazi oyimfihlo | Scrolla Izindaba
IKhomishini kaZondo izovulela uDudu Myeni amacala obugebengu ngokudalula igama lofakazi oyimfihlo yize ayeyalwe kaningi ukuthi angakwenzi lokho.
NgoLwesihlanu iPhini leNhloko yamaJaji uRaymond Zondo uthe, uyalele unobhala wekhomishini ukuthi “afake isikhalazo sobugebengu kuNkk Dudu Myeni”.
UMyeni, owayenguSihlalo we-SAA noMhlathuze Water, wayalwa nguZondo ukuthi angalisho igama lofakazi oyimfihlo ongadalulwanga igama lakhe ngoba esabela impilo yakhe.
Kwakuzolalelwa ubufakazi mayelana noMhlathuze Water. UMyeni wathinteka ebufakazini bukaMnu X, owatshela ikhomishini ukuthi inkampani yakhe yayisetshenziswa enye yinkampani yamadodana kaMyeni ukufaka izigidi ezi-R3.
UMnu X uphinde wathi unabo ubufakazi bokuthi kwakhishwa imali kwi-akhawunti yakhe ngokuyalelwe uMyeni.
UMyeni uqhubekile wamdalula ngesikhathi kulalelwe ubufakazi enkantolo yize wayetsheliwe ukuthi angakwenzi lokho.
UMyeni ungumlingani owaziwayo walowo owayengumengameli wezwe, uMnuz Jacob Zuma. Uhole inhlangano yakhe ngesikhathi engusihlalo webhodi le-SAA. Muva nje umenyezelwe njengomqondisi wobugebengu yiNkantolo eNkulu yasePitoli ngemuva kokuthi i-Organisation Undoing Tax Abuse (Outa) imthathela izinyathelo zokubusa kwakhe okulimazayo enkampanini yezindiza kazwelonke.
Yize kunezinsolo eziningi zokuthi ungumuntu oyingozi kanye nezinsolo zenkohlakalo ezibhekiswe kuye, wenqabile ukuphendula imibuzo ngesikhathi ethula ubufakazi bakhe ngaphambi kukaZondo ekuqaleni kwenyanga.
“Ngicela ukungaphenduli sihlalo, ukuze ngingaze ngizibeke icala” kube yimpendulo yakhe leyo, egcine isiphenduka ihlaya ezinkundleni zokuxhumana.
Umthombo wesithombe: @Alechogg